» २०७६ श्रावण २६ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
२०७६ श्रावण २६ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
ज्यो.चक्रपाणी डुम्रे (शास्त्री)
२६ श्रावण २०७६, आईतवार १०:४७
मेष : आफन्त र मित्रवर्गको सहयोग पाइने समय नै छ ।सकारात्मक सोच बढ्ने छ । तपाईंको चिन्तन र उपायले काम गर्नसक्छ । आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन् । मानसम्मानमा बृद्धि हुनेछ । बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् ।
वृष : यो साता मध्यम छ । दैनिक कामकाजमा बाधा आउने छ । शत्रुहरूको गतिविधिले काममा असर पर्नसक्छ । साताको प्रारम्भमा केहि राम्रो भएता पनि बुधबार पछि अझ प्रतिकूल छ । गरेका काममा अवरोध आउने एवं अपमान वा अपजस सहनु पर्ने हुनसक्छ ।
मिथुन : अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । जागिरेमा बढुवा, प्रशंसा र पुरस्कार पाउन सक्छन् । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । कतै छोटो दुरीको लाभदायी यात्रा पनि हुन सक्छ ।
कर्कट : एकोहोरो र जिद्दीपना त्याग्नु राम्रो हुनेछ ।छरछिमेकमा भएका असमझदारीको सुलह हुनेछ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्र एवं मित्रवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ । बन्दव्यापारमा सोचेजस्तै लाभ लिन सकिने छ । घरपरिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
सिह : सामान्यतया यो साता मध्यम छ । अध्यनमा बाधा आउला । ब्यापारमा केही नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । पारिवारिक असमझदारी बढ्न सक्छ । यद्यपि बुधबारदेखि राम्रो समय आउने छ । पुराना कमजोरी सच्याउदै अगाडि बढ्ने अवसर मिल्ने छ ।
कन्या : शत्रुपक्ष कमजोर हुने छन् । समाजिक क्षेत्रमा
लगानी हुन सक्छ । घरपरिवारबाट साथसहयोग
प्राप्त हुनेछ । कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्, स्वास्थ्य अनुकूल हुनेछ । मित्र, परिवार र सहयोगीले साथ
तुला : आर्थिक रूपमा सबल हुनुहुनेछ, कारोबारमा फाइदा हुने छ । विपरीतलिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पछाडि कुरा काट्ने शत्रु आफैं पराजित हुनेछन् ।
वृश्चिक : साताको सुरूका दिनहरू प्रतिकुल छ्न् ।स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । सानातिना घरायसी कामहरूमा समय व्यतीत हुनेछ । साताको मध्यबाट राम्रो छ । यात्रा सहयात्रा सफल हुन्छ ।
धनु : प्रसन्नता र खुसीको समाचार आउन सक्छ । परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ । रकमको कारोबार र लेनदेनमा विवाद आउने सम्भावना छ, यद्यपि यो साता आर्थिक समस्या हल गर्ने उपाय देखा पर्नेछ ।
मकर : वस्त्र, अलङ्कार आदि खरिद गर्ने योग छ । कुनै
नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट र मित्रता हुनेछ । घुमघाम र भेटघाटको समय छ, मेवामिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ ।
कुम्भ : परोपकारी विचार आउन सक्छन्, त्यस्तै प्रेम र
भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।खानपिनमा रूचि बढ्ने छ । शुभ समाचार सुन्न पाइने छ ।
मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त मिल्ने छ ।
मीन : राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न
लगानी गर्ने समय आएको छ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिनसकिने छ । वैदेशिक व्यापार, कृषिव्यवसाय र नोकरीमा प्रगति होला ।
प्रस्तुतकर्ता : ज्यो.चक्रपाणी डुम्रे (शास्त्री)
अकला देवी ज्योतिष एवं वास्तु सेवा केन्द्र
ति.न. पा. १ नयाँमिलचोक
(ज्योतिष,वास्तु र कर्मकाण्ड सम्पुर्ण सेवाका साथै प्रशिक्षण पनि दिइन्छ ।)
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतदाता प्रदेश राजधानी आउँदै
पार्टी भित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि कांग्रेस शीर्ष नेताबीच छलफल
घुस लिएको अभियोगमा एक प्रहरी पक्राउ
घर बनाउन आवश्यक छैन भन्दै रकम फिर्ता गर्न थाले लमजुङका भूकम्पपीडितले
चिनी मिलका सञ्चालक खोज्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार
३ नेपाली र ४ कोरियाली पर्यटक हिउँमै पुरिएको आशङ्का